पद ठुलो कि, जीवन ठुुलो ? – ebaglung.com
२०७६ कार्तिक २१, बिहीबार ०९:१४	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
मलाई बरिष्ठ पत्रकार शिव गाउलेले भनेको एउटा कुरा पटक पटक याद आउछ । उहांले केही बर्ष पहिले महिला पत्रकारका लागि पाल्पामा आयोजित फिचर लेखन तालिममा भन्नुभएको थियो, पहिले आफु बांच त्यसपछि पत्रकारिता गर । तिमी मरेर हजारौ मान्छे बाच्छन् भने पनि तिम्रो लागि हजार मरेर भएपनि तिमी बाच्नु ठुलो कुरा हो । उहांको भनाईको अर्थ थियो । पत्रकारिताको क्रममा पनि आफ्नै ज्यानै जाने गरेर जेखिम नमोल । यस अघि मैले राष्ट्र र जनताको लागि बलिदानी गर्न तयार छौ भन्ने भाषण वा प्रशिक्षण धेरै सुनेकी थिए । सायद होकी जस्तो पनि लाग्थ्यो तर जव पत्रकार गाउलेको यस्तो कुरा सुने राजनितिक व्याक्तिहरु बाट सुनेका सबै कुरा भ्रम र झुट जस्तो लाग्न थाले । यी सब आदर्श जनता सामु आफु पपुलर बन्ने र अरुलाई प्रयोग गर्ने मात्र रहेछन्की जस्तोे पनि लाग्न थाल्यो ।
सन्दर्भ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो । उहां लामो समयदेखी मृगौला रोगले पीडित हुनुहुन्छ । हुनत मैले लिएको १८ महिने तालिमका सन्दर्भमा मृगौला मुटु प्रेसर सुगर लगायतका रोगहरु घरानिया परिवारका सदस्यलाई लाग्छन् । यी समस्यालाई खानदानी रोगको रुपमा चिनिन्छ भनेर पढाईन्थ्यो । कारण यो हुन सक्छकी गरिब तथा न्युन आय स्तर भएका परिवारमा स्वतं चेतनास्तरको कमी हुन्छ वा स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न र चेकजाच गर्न उनिहरुको आयश्रोतले भ्याउदैन । अर्को कुरा अत्याधिक खानपान र आरामदायी जीवनशैली भएकालाई उक्त रोगले बढि आक्रमण गर्ने पनि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले प्रमाणित गरेको छ । यद्यपी यी समस्या पछिल्लो समय सबै वर्ग र समुहका व्यक्तिमा देखिन थालेका छन् ।
लामो समय देखी मृगौला रोगबाट पीडित प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चस्तरको स्वास्थ्य सेवा पाईरहनुभएको छ । मुलुकको एउटा अपरिहार्य सर्वमान्य नेताको लागि उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु स्वभाविक हो । उहांको मृगौला प्रत्यारोपण भएको पनि करिब १२ बर्ष पुग्यो । आफ्नो निजी मृगौला जस्तो प्रत्यारोपण गरेको मृगौला अवस्य पनि हुदैन । एउटा अवधी समाप्त भएपछि प्रत्यारोपित मृगौलाले काम गर्ने अवस्था अत्यन्त न्युन हुन्छ । पछिल्लो समय उहांले ग्राण्डी अस्पतालमा मृगौैलाको डायलासिस गराउनुभयो । अस्पताल बाट निस्कीदा उहांको मुहारमा देखिएको चमकले सबैलाई हर्षित पनि बनायो । अवस्य पनि सकरात्मक सोचले जो कुनै ब्याक्तिको आयु लम्बीने निश्चीत छ ।
प्रधानमन्त्रीज्युको उच्च मनोबलका कारण उहांको स्वास्थ्य सुदृढ बन्दै जाने हामी अनुमान गर्न सकिन्छ । भनिन्छ बढ्दो उमेर संगै खानपान र आनिबानी हरेक कुरामा सचेत हुन आवश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको स्वाथ्य अवस्था लाई मध्यनजर गरेर धेरैले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् । कतीले उहांलाई प्रधानमन्त्री पदबाट बिश्राम लिन समेत आव्हान गरे । कतीले ओलीकै निरन्तरता चाहेका छन् । बिश्राम लिएको हेर्न चाहने र उहांकै निरन्तरता चाहने कतिपयका आआफ्नै स्वार्थ नहोलान पनि भन्न सकिन्न । उहांले बिश्राम लिदा वा नलिदा आफुहरुको भविश्य देख्ने पनि ठुलै तप्का हुन सक्छ । सकरात्मक रुपमा हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको चिन्ता र चासोको हिसावले स्वस्थ्य तथा दीर्घ जीवनको कामना गरेर बिश्राम लिन आव्हान गर्ने पनि हुनसक्छन् । कार्यव्यस्थता र तनावका कारणले पनि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य थप जटिल नबन्ला भन्न सकिन्न । किनकी जीवनको उत्तरार्ध भनेको अलि सचेत हुनुपर्ने अवस्था हो । त्यसैले अव सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले उहां निरोगी वा दीर्घजीवी भएको हेर्न चाहने की उहांको व्यक्तिगत जीवन जेसुकै होस प्रधानमन्त्रीमा आसीन भैरहेको हेर्न चाहने ? हुनत कतिपय शुभचिन्तकलाई लाग्न सक्छ जसरी भएपनि ओलीकै नेतृत्वबाट देश चलोस पार्टी चलोस गुट चलोस तर स्वास्थ्य जेसुकै होस । यस्तो सोचाई मुलकको लागि हितकर त होला नहोला तर प्रधानमन्त्रीको लागि भने अवश्य हुनेछैन ।
अतं पहिले बांच र पत्रकारिता गर भन्ने बरिष्ठ पत्रकार गाउलेले भने जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको जीवन पनि जतिसक लम्बिनु पर्छ । पहिलो कुरा पद भन्दा ज्यान ठुलो हो । अर्को कुरा उहांको मृगौला पुनं अर्को पटक प्रत्यारोपण भएर स्वास्थ्य पुनं सबल बन्दै गएछ भने प्रधानमन्त्री वा अझ उपल्लो पद पनि आउने छ । जीवन रहे हरेक कुराको सम्भावना रहन्छ । अतंं पद फेरी आउने छ तर कथमकदाचित उहांको स्वास्थ्य संकटमा पर्न गयो भने जीवन फेरी फर्काउन सक्ने छैनौ । त्यसैले नेतृत्व उहांकै पार्टीले गरोस उस्तै उत्तिकै खुवी भएको नेताले गरोस गुटले गरोस तर उहांको स्वास्थ्य संकटमा आउनु हुदैन । त्यसैले अव बिकल्प खोज्नु उक्तम होला भन्ने लाग्छ ।
२०७६ कात्तिक २१ ।